WARARKA BARAAWEPOST Talaado 7 august 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Oo Casho Sharaf U Sameeyey Taliyeyaasha Ciidammada Qalabka Sida Ee Soomaaliya Iyo Kuwa AMISOM
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay munaasabad casho sharaf oo loogu dabaal degayo sanad guuradii Koowaad ee xornimada Muqdisho u sameeyey Taliyeyaasha Ciidammada Qalabka ee Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Casho Sharaftan oo ka dhacday aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia ayaa waxaa Madaxweynaha ku weheliyey Ra�isulwasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Xuseen Carab Ciise, Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdisamad Macalin Maxamuud waxaana kasoo qeybgalay Taliyeyaasha Ciidammada xoogga dalka iyo Booliiska Soomaaliyeed S/gaas Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini iyo S/gaas Shariif Sheekhuna Maye, Agaasimeaha guud ee Wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Bashiir Goobe iyo agaasime Kuxigeenka Hay�adda Nabad Sugidda Qaranka iyo Taliyeyaasha Ciidammada AMISOM.
Taliyeyaasha Ciidammada Xoogga Dalka iyo Booliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo S/gaas Shariif SheekhUnaa Maye oo halkaas khudbado kooban ka jeediyey ayaa shacabka Muqdisho ugu hambalyeeyey sanad guuradii Koowaad ee kasoo wareegatay markii ay caasimadda ka xorowday Maleeshiyada Al-Shabaab.
Saraakiil u hadashay Ciidammada Midowga Afrika oo iyaguna khudbaddo ka jeediyey munaasabadda ayaa shacabka reer Muqdisho ugu hambalyeeyey sanad guuradan loo dabaal degayo waxaana ay rajeeyeen in sanadka soo socda sidaan iyo si ka wanaagsan loo wada dabaal dego.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane C/samad Macalin Maxamuud oo khudbad ka jeediyey Munaasabadda ayaa hambalyo kadib faah faahin ka bixiyey mudadii sanadka aheyd ee ay Muqdisho xor ka tahay Maleeshiyada Al-Qaeda sida ay hay�adaha ammaanka ugu istaageen iney sugaan ammaanka Caasimadda ilaa iyo haddana ay ugu taagan yihiin mar walba in amni buuxo ay dhaliyaan.
Ra�isulwasaare Ku xigeenka ahna Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Xuseen Carab Ciise oo isna khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa hambalyo kadib xusay in nabadda Muqdisho maanta ka jirta iyo sanad guurada loo dabaal degayo ee xornimada aysan ciyaar ciyaar ku imaan ee dhiig badan loo huray waxaana uu Ciidammada AMISOM uga mahad celiyey dadaalkii hagar la�aaneed ee ay muujiyeen.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed oo ugu dambeyntii munaasabadda khudbad ka jeediyey ayaa casho sharafta ku tilmaamay iney tahay mid qeyb ka ah farxadda ay dadka reer Muqdisho ay xornimadooda ugu dabaal degayaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in farxadda aan hadda heysano muhiim ay tahay in la muujiyo lana rabo in si kal iyo lab ah loogu mahad celiyo Ciidammada AMISOM oo runtii dhiig badan u bixiyey si ay inoo taageeraan isla markaana halkaan ay ku waayeen rag badan oo muhiim u ahaa saaxiibadoodna ahaa isla markaana saraakiil ay ku jireen kuwaasoo laga xusi karo taliyihii Ciidammada Burundi iyo saraakiil badan.
Madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ayaa waxaa uu xusay in Al-Shabaab iyo Al-Qaeda lala galay dagaal aad u adag hadii aanay dagaalkaasi lala geli laheynna Muqdisho aysan xoroowdeen,shacabka Soomaaliyeedna laga doonayo iney fahmaan muhiimadda ay leeyihiin Ciidammada AMISOM.
Masdaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in markii ugu horeysay ee uu qabtay xilka Madaxtinimo uu juhdi iyo dadaal badan ku bixiyay sidii loo abuuri lahaa wadashaqeyn dhab ah oo dhexmarta Ciidammada AMISOM iyo kuwa Dowladda waqti dheer kadibna Alle mahadii lagu guuleystay wadashaqeyntaas iyo isfaham buuxa , sidoo kalena ma hana oo keliya ciidamada dhexdooda, maanta xitaa AMISOM iyo shacabka ay isfahmeen taasina ay tahay guul weyn.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta 95% taageersan yihiin joogitaanka Ciidammada AMISOM taasina ay ugu wacantahay fahamka ay fahmeen shacabku ujeeddada Ciidammada Midowga Afrika Soomaaliya uga howlgalayaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay maalintaan loo dabaal degayo ee 06-August isagoo xusay iney tahay maalin qiimo leh maaddaama maanta oo kale sanad ka hor Muqdisho la xoreeyey.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa khudbadiisa sidoo kale kusoo hadal qaaday marxaladaha siyaasadeed halka ay marayaan ayaa waxa uu tilmaamay in wax badan oo guulo ah la gaaray kuwaasi oo ay ugu horeeyaan sugidda nabad gelyada,ansixinta dastuurka,soo xulitaanka baarlamaankana ay haatan marayso meel gabo gabo ah oo dhowaan ay dalka ka dhici doonto doorasho xor ah.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa caddeeyay inay rabnaa Afarta sano ee soo socota Soomaaliya iney noqoto meel nabad gelyo buuxda ay ka jirto,isla markaana Ciidammada Qalabka sida iyo hay�adihii dowliga ahaa ay si buuxda u dhismaan, shacabka Soomaaliyeedna la iloowsiiyo dhibaatadii 20ka sano,isla markaana Afrika iyo aduunyada ka dhex muuqdaan,isla markaana uu rajeynayo in hankaas Alle uu ku guuleeyo maaddama oo dariiqeedii lagu socdo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa dhanka xusay in maamulka dowladeed ee haatan ka jira dalka uu gaarsiiyey dalka waxyaabo aanan lagu riyoon oo ay ka mid tahay in magaalada Muqdisho 42 sano kadib ay marti geliso oo ay ka dhacdo doorasho xor ah taasina ay tahay guul aad u weyn.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu dambeyntii muujiyey rajadiisa ku aadan inuu ku guuleysto doorashada soo socota si�uu u dhameystiro howlaha hadda ay dadaaladoodu socdaan waxaana uu saraakiisha ciidammada kula dardaarmay ineysan halgankooda saameyn ku yeelan siyaasadda iyo howlaha doorashada oo inta arimahaasi ay socdaan ay iyaguna Al-Shabaab iyo Al-Qaeda dalka kasii xoreeyaan.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha waxa uu shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqay iney gacmaha is qabsadaan,una istaagaan sidii ay horumarkooda isaga kaashan lahaayeen maaddaama uu dalku yahay dal qani ah oo uu ku haminayo inuu gaarsiiyo in ummaddu guud ahaan kheyraadkaas ka wada faa�ideystaan.